ရှညောသား: August 2015
ဟင်းချက်နည်းကလည်းအတော်လေးလွယ်ပါတယ်။ငါးပိလက်တဆစ်လောက်ကိုရေသင့်တော်ယုံထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီဥသေးတစ်လုံးလောက်နဲ့ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်။ဟင်းအိုဆူတော့ရွှေဖရုံသီးထည့်ပြီးကျက် အောင်ထားနောက်ဆုံးရေလည်းကျရွှေဖရုံသီးလည်းကျက်တော့မှရေဆေးထားတဲ့ပီလောရွက်ကိုထည့်ပြီး
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, August 29, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
**ပုံလေးတွေကို XL ဆိုဒ်နဲ့တင်တာဘလော့စာကိုယ်နဲ့မဆန့်ဖြစ်နေလို့ L size နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, August 22, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အညာသားလက်ရာ ဖက်ထုပ်ကြော် :)
ဘာလုပ်ကျွေးရမှန်းမသိလို့လွယ်လွယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဂျပန် Udon ခေါက်ဆွဲကိုနန်းကြီးသုပ်အနေနဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, August 16, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
(၅)လီတာဆန့်ရေဗူးအပြာရောင်လေးနေရာမှာတော့ Good to drink စာတမ်းလေးရေးထားတဲ့ရေပိုက်
တယ်။ငါ့သားကိုဗေဒင်ဆရာမပြောတာများမှန်နေပြီလားမသိဘူးတဲ့...:) ဒီလိုပါပဲအမေရယ်အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တာပါလို့ပဲဖြေလိုက်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းအမေ့ဆီဖုန်းဆက်ရင်လူလေးဒီတစ်ခေါက်မြန်မြန်
မို့ဟင်းခွက်ပုံတွေ (၂) လနီးပါးပျောက်နေပါလိမ့်မယ်...။နောက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုရောက်မှပဲဆက်
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, August 01, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook